२०७५ असार २५ सोमबार १४:१४:००
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रधानमन्त्री केपी ओली
यदि उपकुलपति असलै हुनुहुन्थ्यो भने ठाउँ–कुठाउँमा गएर असभ्य भाषामा प्रस्तुत हुन जरुरी छैन, थिएन । अन्तर्वार्ता दिनुभएछ– ‘राजा–महाराजासँग त लडेँ, केपी ओलीसँग... ’। उपकुलपति को हो र, प्रधानमन्त्रीसँग लड्नुपर्ने ? लड्नै हिँडेको भए त थुन्नु पो पर्‍यो ! तर हामीले त्यसो त भनेको छैनौँ । भनेको यत्तिमात्रै हो– उपकुलपतिज्यूले उपकुलपतिको हैसियतमा गर्नुपर्ने काम गरिरहनुभएको थिएन । उपकुलपति ठट्टाको पद होइन, सम्मानित पद हो । विदेशमात्रै होइन, जहाँ जाँदा पनि स्वीकृत लिनैपर्छ । मैले बुझेसम्म उहाँले अनुमति लिनुभएको छैन । शिक्षा सचिवले ‘तपाईं किन जाँदै हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा उहाँले मोबाइल नै अफ गर्नुभयो । जवाफ दिनुभएन । त्यसपछि उहाँले मलाई भेटाउनुहोस् भन्नुभयो होला । प्रहरीले उहाँलाई ल्यायो होला ।